अफिसको कामले जुम्ला जानु पर्ने भयो ! करिब चार दिन लामो यात्रा र बसाइको तय एकदिनमै भयो । पुस र माघको जाडो, एकदमै चिसो ठाउँ, त्यहीमाथि हिउँले ढपक्क ढाकेको संयोग ! हतार–हतारमा न्यानो लुगाको तयारी भइसकेपछि भोलिपल्ट हुने दिनभरिको यात्रा, सेता—सङ्ला डाँडापखेरा अनि नौलो अनुभव सम्झिँदै कोल्टे फेरें । मन भने जुम्लामा बिताइने चार दिनको कार्यतालिका कोर्नमै व्यस्त थियो । जसोतसो निद्रा पर्‍यो ।
हामी कालिकोटबाट ओरालो झरिरहेका थियौं, जुम्लाले स्वागत गरिसकेको थियो । कर्णाली नदीमाथि बनेका काठका पुल देखिन्थे । ती पुलमाथि सजाइएका काठका मूर्तिले मलाई लोभ्यायो । मलाई त्यो काठका मूर्ति्भित्र थोरै कला अनि धेरै रहस्य लुकेको भान हुन्थ्यो । स्थानीयलाई सोध्दा थाहा पायौं— बाईसे र चौबीसे राज्यकालका राजारानीको सम्झनामा ती पुल बनाइएका रहेछन् । कति पुलहरू गाउँलेले आफ्नो ठाउँ छोड्दाको सम्झनामा बनाएका रहेछन् । मलाई ती मूर्ति अझै रहस्यमय लागिरहे ।
एकैछिनमा हामी जुम्ला पुग्यौं । साँझ परिसकेको थियो । दिनभरिको थकानले गर्दा हामी सीधै होटेल गएर आराम गर्ने निधो ग¥यौं ।
मनभरि अनुभव नै अनुभवका छायाप्रतिहरू थिए । हरेक क्षणहरूको झझल्को आइरह्यो । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्भावनालाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ, कसरी नयाँ सम्भावना अगाडि सार्न सकिन्छ भन्ने कुराले मलाई झक्झक्याइरह्यो । सम्पूर्ण यात्रा अनुभव, महत्वपूर्ण स्थान अनि मनमोहक दृश्यसहितको एउटा दृश्यचित्र (भिडियो) बनाएर सार्वजनिक गरें, जुन तपाईंले https://www.youtube.com/watch?v=GElnyMKnWCA&feature=youtu.be मा हेर्न सक्नुहुनेछ । यो लेख र फोटो १२ खरि अनलाईनबाट साभार गरीएको हो ।